Prasta Khabar-किन भयो कुखुरा व्यवसायी र एसपीबीच विवाद ?
किन भयो कुखुरा व्यवसायी र एसपीबीच विवाद ?
१० जेठ, हेटौँडा । भर्खरै मकवानपुर सरुवा भई आएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लोकेन्द्र श्रेष्ठ र कुखुरा व्यसायीबीच विवाद भएको छ । प्रहरीले कागजात विना कुखुराको ल्याएको भन्दै पशु क्वारेन्टाईन पथलैया पढाई दिएपछि एसपी र कुखुरा व्यवसायी विच विवाद भएको हो ।
कुखुरा व्यवसायीहरुले प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिन खोजको आरोप लगाएका छन् भने प्रहरीले भने जाँचका क्रममा कागजात नभेटेकाले कानून अनुसार काम गरेको बताएको छ । कुखुरा व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी राजु अधिकारीले काठमाण्डौंबाट ल्याएको करिब ४ हजार २ सय चल्ला रहेको गाडी सम्पूर्ण कागजात हुँदाहुँदै पनि एसपी श्रेष्ठको निर्देशनमा क्वारेनटाइन व्यवसायीहरुको भनाई छ । कुखुरा व्यवसायी संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष भूमिनन्द गौतमको लागि छतिवन पठाउँदै गरेको अवस्थाको चल्लाको गाडी हेटौंडा ६ र ७ को सिमानामा पर्ने हरियाली चौकीका हवल्दारसहितले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
बागमति पोल्ट्री प्रालि काठमाण्डौंबाट ५ जना व्यवसायीका लागि ल्याएको चल्ला ४ जना व्यवसायी कहाँ पु¥याइसकेपछि छतिवन लैजाने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको अधिकारीले दावि गरे । चल्लाको गाडीमा बिल, भेटनरीलगायतका कागजात नभएको स्वीकार्दै उनले प्रहरीले माग्ने बित्तिकै उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले चल्लाको गाडीसंग आवश्यक कागजात नभेटिएकोले क्वारेनटाइन पठाइएको प्रतिकृया दिए । बर्ड फ्लुको संक्रमण बढि रहेको समयमा कागजात विना आएको चल्ला शंकास्पद रहेकोले नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टाईन पठाएको उनको भनाई छ ।